Mohan Kanungo, Author at Mission Asset Fund
लेखक: मोहन कानुनगो
वित्तीय आपतकालिनको लागि आफैलाई तयार गर्दै
Mohan Kanungo मा मे 22, 2017 द्वारा लिखित।
कसरी तपाईं एक इमिग्रेशन सम्बन्धित आपतकाल एक वित्तीय एक हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ
नजरबन्द र निर्वासन परिवारको वित्तीय मा ठूलो असर गर्न सक्छ। एक चेक खातामा कार, अपार्टमेन्ट, वा पैसालाई के हुन्छ?
आप्रवासीहरूका लागि वित्तीय आपतकालीन कार्य योजना
यो नयाँ स्रोत एक कार्य-उन्मुख उपकरण हो जसले परिवारहरूलाई अगाडि योजना बनाउन र उनीहरूको पैसा र सामानहरू आप्रवासीको आपतकालिन अवस्थामा सुरक्षित राख्न मद्दतको लागि ठोस सुझावहरू प्रदान गर्दछ। शीर्षकहरू समावेश:
तपाइँको पैसा सुरक्षित गर्नुहोस्: तपाइँको पैसा सुरक्षित र पहुँचयोग्य राख्न सरल चरणहरू - अनलाईन खाताहरू सेट अप गर्नबाट स्वचालित बिल भुक्तानमा
तपाईंको सामानको रक्षा गर्नुहोस्: कसरी आफ्नो सामानको स्टॉक गर्ने, बीमा लिने बारे किन विचार गर्ने, र कसरी तपाईंको सबै चीजहरूको लागि योजना बनाउने
आपतकालिनको लागि तयार गर्नुहोस्: सुझावहरू तपाईंलाई बचत लक्ष्य सेट गर्न, तपाईंको क्रेडिट कार्ड सुरक्षित गर्न वा क्राउडफन्डि campaign अभियान सेट अप गर्न मद्दत गर्न
एक कार्य योजना बनाउनुहोस्: प्रत्येक सेक्सनमा चेकलिस्टहरू र टेम्पलेटहरू सामेल छन् त्यसैले तपाईंलाई तयारीको लागि के गर्ने भनेर थाहा छ
वेबिनरहरू र जानकारी सत्रहरू
जानकारी सत्रहरू गैर मुनाफा, फाउंडेशन, वा सरकारी कर्मचारीलाई गाईडमा पहुँच गर्नका लागि अवसरहरू छन्, सामग्री कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारे तालिम प्राप्त गर्नुहोस्, र यसलाई समुदायसँग साझा गर्न सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईं हाम्रो स्टाफको सदस्यलाई वक्ताको लागि आमन्त्रित गर्न रुचि राख्नु हुन्छ भने, कृपया हामीलाई मार्केटिंग@missionassetfund.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
खाना र परिवारमा: इसाबेलको कथा
Mohan Kanungo मा नोभेम्बर 22, 2016 द्वारा लिखित।
इसाबेल लेन्डि C सर्कलमा सामेल भइन् उनको व्यवसायलाई बढाउन सहयोग पुर्‍याउन। यस गर्मीमा, उनको रेस्टुरेन्ट "एल् बुवेन कमर" बर्नाल हाइट्समा खोलियो।
इसाबेल एक एमएएफ ग्राहक र उद्यमी हुन् जसले आफ्नो पहिले नै सफल पाक व्यवसाय विस्तार गर्न Lending Circles प्रयोग गर्छिन्। उनले यी टिप्पणीहरु लाई MAFter पार्टी, MAF को राष्ट्रिय Lending Circles नेटवर्कको उत्सव जुन अक्टोबर २ 27, २०१ 2016 मा सम्पन्न भयो। उनको नयाँ बर्नाल हाइट्स रेस्टुरेन्ट एल बुवेन कमर कार्यक्रम पूरा गर्न मद्दत गर्‍यो।
खानेकुराप्रतिको मेरो प्रेम एक सानो केटीको रूपमा शुरू भयो, जब म मेक्सिको सिटीमा बस्दै थिएँ, जहाँ मेरो जन्म भएको थियो। मेरी आमा र मेरा सात बहिनीहरू पूरै परिवारको लागि खाना पकाउँथे, विशेष गरी छुट्टिहरूको लागि। खाना पकाउने जहिले पनि मेरो ध्यान आकर्षित गर्‍यो।
त्यसोभए २००१ मा मेरो परिवार स्यान फ्रान्सिस्कोमा बसाइँ सरेपछि मैले आफ्नो टेन्डरलोइनबाट खाना पकाउन थाले।
यो नयाँ ठाउँमा समुदाय सिर्जना गर्ने तरिका हो।
म परम्परागत खाना तयार गर्दछु जसले मलाई मेक्सिकोको सम्झना दिलाउँदछ: स्टुज, सिमी र चामल, र टार्टिला जुन मैले स्क्र्याचबाट बनाएको थिएँ।
२०० In मा, एक साथीले म भ्रमण गर्न सिफारिस गर्‍यो ला कोकिना, एक संस्था जसले महिला उद्यमीहरूलाई समर्थन गर्दछ, त्यसैले म मेरो व्यवसायलाई औपचारिक बनाउन सक्छु। त्यस्तै मेरो व्यापार बढ्न थाल्यो।
मैले नो भ्याली फार्मर्स बजारमा स्ट्यान्ड खोले र मिसनमा पिज्जरिया डल्फिनाको लागि रोटी स्टिक बेक गर्न शुरू गरें। हामीले हाम्रो व्यवसायलाई एल बुवेन कमर बोलाउने निर्णय गरेका छौं। मैले प्रामाणिक मेक्सिकन भाँडा बनाउनको लागि आफूलाई समर्पित गरें। आज सम्म, म अझै पनि तिल वर्डेको लागि मेरी आमाको विधि प्रयोग गर्दछु।
सुरुमा यो गाह्रो थियो। मैले यति धेरै लगानी गर्नुपर्‍यो - पहिले एउटा ट्रकमा, त्यसपछि मेरो व्यवसायको लागि भुक्तानीमा - कि मैले कुनै पनि नाफा गरिन। म निराश महसुस गरें - मलाई मेरो श्रीमान्लाई टिप्पणी गर्ने सम्झना आउँछ, "मलाई थाहा छैन यदि म यो गरिरहनुपर्दछ भने।"
तर मेरो परिवारले मलाई समर्थन गर्नुभयो। मेरो एक छोराले मलाई प्रोत्साहनको लागि सकारात्मक सन्देशहरू सहित नोटहरू लेख्न थाले। म कटिबद्ध थिएँ, र मैले आफूलाई हार दिन अनुमति दिइन।
मैले किसानहरूको बजारमा मेरा तामेलहरू बेच्न औद्योगिक स्टीमर किन्नुपर्‍यो, तर यसको मूल्य १ १ टी २ टी १,4०० थियो, र हामीसँग पर्याप्त बचत भएन। यो त्यो क्षणमा हो कि मैले भाग लिएको एक साथी मार्फत एमएएफको बारेमा सुनें Lending Circles MAF को साथ। म मेरो आफ्नै लेन्डि C सर्कलमा सामेल भएँ, र पहिलो पटक मैले पैसा बचत गर्ने सुरक्षित, विश्वसनीय तरीका पाएँ।
जुनमा, मैले मेरो रेस्टुरेन्ट खोले, एल बुवेन कमर, बर्नाल हाइट्सको मिशन स्ट्रिटमा। मेरो श्रीमान्, छोरा र म सँगै व्यापार चलाउँछौं, र मेरो श्रीमान् अझै शनिबार किसान बजारमा काम गर्नुहुन्छ।
जे होस् व्यापार मेरो घरमा शारीरिक रूपमा छैन, भैरहेको रेस्टुरेन्ट व्यावहारिक मेरो घर हो। म मेरो आफ्नै घरमा भन्दा त्यहाँ बढी समय खर्च!
हामीले मेक्सिकन शिल्पका साथ रेस्टुरेन्ट सजाय्यौं, र खेलौना कारका साथ पनि मेरा छोराहरू खेल्थे जब उनीहरू थोरै थिए भने।
यसले हामीलाई सम्झन मद्दत गर्दछ कसरी र कहाँ हाम्रो सपना शुरू भयो.
Lending Circles हाम्रो पहिलो वित्तीय ढोका थियो - तिनीहरूले मलाई मेरो आफ्नै रेस्टुरेन्ट खोल्न loansणमा पहुँच दिए, जुन यस्तो कुरा हो जुन मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिन। तर त्यस भन्दा बढि महत्वपूर्ण कुरा, तिनीहरूले मलाई वित्तीय प्रणाली प्रबन्ध गर्न सिक्न मद्दत गरे भविष्यमा अझ बढी अवसरहरू खोल्नको लागि।
मेरो सपना जारी छ। हामी निर्माणको keepण कायम राख्न र हाम्रो अर्को सपना साकार गर्न मद्दत गर्न परिवारमा एक लेन्डि C सर्कल गठन गर्ने योजना गर्दैछौं।
अवसरहरू बित्दै: नागरिकता भन्दा पहिले मेरो जीवन
Mohan Kanungo मा जुन 24, 2015 द्वारा लिखित।
मेरो DREAMer बाट अमेरिकी नागरिकको लागि Lending Circles नागरिकता को लागी यात्रा
व्यक्तिहरू सामान्यतया कागजको साथ उनीहरूको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँछन्, तर म चीजहरू मेरो तरिकाले गर्न चाहन्छु। मैले पेपरको साथ संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने मेरो १th औं वार्षिकोत्सव मनायो: एन 400०० फारम। यो फारम मेरी आमाको जीवनमा आउने प्रतिज्ञा हो। यो मेरो अमेरिकी नागरिकता पाउने अवसर हो। धेरै आनन्द र उत्साहको साथ, एउटा सानो प्याकेट जसमा एन 400०० फारम, मेरो पासपोर्ट तस्वीरहरू, र चेक समावेश छ, मैले अप्रिल १ तारिखमा अमेरिकी नागरिक बन्ने प्रक्रिया शुरू गरें। कागजातको यो सरल सेटको मतलब संसार नै हो। यो मेरो संघर्ष हो, मेरी आमाको स my्घर्ष हो, मेरी बहिनीहरूको स sisters्घर्ष, र यो एक उत्तम भविष्यको प्रतिज्ञा हो।
मेरो अध्यागमन कथा मेरो आमाको बारेमा जति छ यो मेरो बारेमा छ।
मेरी आमाले हामीलाई यहाँ ल्याउन यति धेरै त्याग गर्नुभयो र उनले हामीलाई यस्तो ठाउँमा हुर्काउन यति धेरै कुरा जितिन् कि त्यस समयमा उनको लागि विदेशी थियो। मेरी आमाले एल् साल्भाडोरलाई एउटा हिंस्रक विवाहबाट भाग्न छोडिदिनुभयो, जसले आफ्ना छोरीहरू र नर्सको रूपमा उनको जीवनलाई बचाउनको लागि अन्तिम पटक छोड्नुभयो। उनले आफ्नो परिवार, जागिर र जीवनलाई छोडिन् जसले गर्दा हामी अझ राम्रा चीज पाउन सक्दछौं - उनीले भन्दा बढि केहि।
मेरी आमाको दुई वर्ष पछि मैले एल साल्भाडोर छोडे, जब म ११ बर्षको थिएँ र मेरी दिदीहरू र म उनीहरुसँग पुनर्मिलन हुनेछौं भन्ने वाचाले हामी डिज्नील्याण्ड जान्छौं (धेरै जसो आप्रवासी बच्चाहरू मलाई थाहा छ त्यो प्रतिज्ञाको साथ आउँछन्), यद्यपि हामीले त्यो यात्रा गर्न सकेका छैनौं ... अझैसम्म)।
डिज्नील्याण्ड, र चलचित्र सिताराहरूको सट्टामा म रमणीय ओकल्यान्ड, सीएमा बस्न आएको हुँ, जुन अझै राम्रो छ!
हाम्रो पहिलो अपार्टमेन्ट सानो र साँघुरो भए पनि, यो प्रेम र हाँसोले भरिएको थियो। म धेरै बर्ष पछि स्यान फ्रान्सिस्कोमा सरे जहाँ म जरा राख्न सक्षम थिए। तर ती जराहरूलाई तुरुन्तै माटोमा त्यत्ति गहिरो खन्ने अनुमति थिएन जुन मैले खोजें।
यो म किशोरावस्थामा हुँदा मैले महसुस गरें कि यो वास्तवमा Undocumented हुनुको अर्थ के हो। हाई स्कूलमा हुँदा, मैले मेरो स्थितिको कारण धेरै अवसरहरू छोडिदिएँ। म वाशिंगटन डीसी भ्रमण गर्ने केटीहरूको समूहमा सामेल हुन सक्दिन किनकि म स्कूलको दायित्व थिए। म मेरो अनुभव निर्माण गर्न ईन्टर्नशीपको लागि पनि आवेदन दिन सक्दिन किनकि मसँग सामाजिक सुरक्षा नम्बर छैन।
र त्यसपछि मैले जीवनकालको अवसरलाई अस्वीकार गर्नुपर्‍यो।
म जिज्ञासाले भरिएको थिएँ र मेरो नयाँ घर खोजी गर्न चाहान्थें, तर अकुशल भएकोले मलाई क्यालिफोर्नियामा अन्वेषण गर्न सीमित गर्यो। त्यसबेला पछाडि कोही थिएन, तर मेरा सबै भन्दा राम्रा साथीहरूलाई थाहा थियो कि म undocumented हो। म त्यस्तो अवस्थामा मेरो वरिष्ठ वर्गमा एक मात्र थिएँ र मलाई यति ठूलो अवसरहरू अस्वीकार गर्नुको वास्तविक * कारण बताउन म पनि डराएँ।
त्यसपछि मैले क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय लस एंजेलिसमा भाग लिने अवसर पार गर्नुपर्‍यो किनभने यसको लागत धेरै भयो र म आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुन सक्दिन। २०० 2006 मा, जब मैले कुन कलेजमा जाने भनेर निर्णय गरिरहेको थिएँ, त्यहाँ Undocumented विद्यार्थीहरूका लागि केही स्रोतहरू थिए। हामीसँग एबी 4040० थियो जसले हामीलाई राज्य शिक्षण शुल्क तिर्न अनुमति दियो तर म क्याल ग्रान्टमा योग्य हुन सक्षम भएन वा मेरो नागरिक साथीहरूले जस्तै संघीय आर्थिक सहयोग गर्न पनि सक्षम भएन। यसैले मैले सान फ्रान्सिस्को स्टेट युनिभर्सिटीमा गएँ र कलेजको माध्यमबाट यसलाई चिका लाटिना फाउन्डेशन छात्रवृत्तिबाट प्राप्त छात्रवृत्तिको लागि बनाएको छु जसको लागि योग्य हुनको लागि सामाजिक सुरक्षा नम्बर आवश्यक पर्दैन।
अमेरिकाको बासिन्दा बन्न अध्यागमन अवरोधहरू पार गर्न दुई बर्ष भन्दा बढी समय लाग्यो, जुन कुरा मैले हल्का शब्दमा भनेन।
एक अमेरिकी नागरिक बन्न सक्षम हुन, तपाईंले आवेदन दिनको लागि निवासी बन्न पाँच वर्ष पर्खनु पर्छ। एक बर्ष पहिले, अमेरिकी निवासी बन्ने हाम्रो 5th औं वार्षिकोत्सवको पूर्वानुमान गर्दै, मैले मेरी आमा र बहिनीलाई आमन्त्रित गरें नागरिकताका लागि उधार सर्कल। यस कार्यक्रमको बारेमा मैले सैन फ्रान्सिस्को स्टेट युनिवर्सिटीको सेसर चाभेज संस्थानको लागि इंटर्नर गर्ने क्रममा फेला पारें। म विद्यार्थी शैक्षिक मूल्यांकनको लागि सर्वेक्षण स collecting्कलन गर्ने सहायकको रूपमा कार्यरत थिए वित्तीय अभ्यासहरु मिशन जिल्लामा व्यक्तिहरूको।
विद्यालयको लागि काम गर्दा, मैले विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा पत्ता लगाए जुन MAF ले प्रस्ताव गर्दछ - ती मध्ये एक नागरिकताका लागि Lending Circles हो। नागरिकता आवेदन दिनको लागि चाहिने पैसाले हामीलाई रोक्दैन भनेर मैले साइन अप गरें। हामी तीनजनाको लागि, यसलाई लागू गर्न १TP२T२००० भन्दा बढी लाग्ने थियो। स्यान फ्रान्सिस्कोमा बढ्दो लागतको साथ, मेरी आमालाई भाँडामा राख्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ र मेरी बहिनीको कलेज क्यारियरलाई समर्थन गर्ने। कार्यक्रमले हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगको लागि प्रत्येक महिना पैसा अलग राख्न मद्दत गरेको छ। हामीलाई थाहा थियो कि हाम्रो पैसा लेन्डिंग सर्कल प्रोग्रामको साथ सुरक्षित हुनेछ र जब हामी आवेदनको लागि तयार हुन्छौं भने हामी यसलाई पहुँच गर्न सक्षम हुनेछौं।
लेन्डि C सर्कल प्रोग्राममा, हामी प्रत्येकले दश महिनाको लागि $68 को मासिक भुक्तानी गरेका थियौं, नागरिकता आवेदनको लागतको लागि $680 खर्च गर्न सक्षम हुन।
बासिन्दा बन्नु ठूलो आशिष्‌ साबित भएको छ। म एउटा जागिर पाउन सक्षम छु जुन मैले मनपराउने गर्छु र ती ठाउँहरूमा यात्रा गर्नु जुन म केवल वर्षौं पहिले सपना देख्थें। म Lending Circles लाई यति धेरै माया गर्थें कि मलाई थाहा थियो कि म MAF को भाग हुनुपर्दछ। २०१ 2014 को ग्रीष्म Coतुमा एक कार्यक्रम समन्वयकको रूपमा म्याफमा स्टाफमा सम्मिलित हुन पाउँदा म खुसी थिएँ। मेरो जागिरले मलाई व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्न सक्षम गर्दछ जसको कथाहरू मेरो जस्तो देखिन्छ। म ती चुनौतीहरु र मेरा आफ्नै अनुभवहरुका अवसरहरु लाई अमेरिकामा Undocumented को रूपमा देख्छु र म उनीहरु लाई आफ्नो यात्रा को लागी मद्दत गर्न चाहन्छु। अब जब म एक नागरिक बन्ने प्रक्रियामा छु, म विशेष गरी मेरो भोट २०१ presidential को राष्ट्रपति चुनावमा आधिकारिक रुपमा अभिव्यक्त गर्न पाउँदा ठूलो उत्साहित छु!
मैले यस बर्षको अप्रिल १ मा नागरिकताका लागि मेरो आवेदन पेश गरेको छु र म अन्तर्वार्ता प्रक्रिया जारी राख्न र शपथ लिनको लागि कुर्दै छु। म मेरी आमालाई सबै नागरिक मेलाहरूमा अद्यावधिक राखेर पनि त्यसो गर्न प्रोत्साहित गर्दैछु। सहर, उनको अन्तर्वार्ता प्रश्नहरूको लागि तयार गर्दै, र सानो तर लगातार तरिकामा उनलाई मद्दत गर्ने (जस्तै उनको फोनमा नागरिकता अनुप्रयोग स्थापना गर्न ताकि उनी जानको लागि अध्ययन गर्न सक्दछन्)। मेरो लक्ष्य उनको यस महिनाको अन्त्य सम्ममा लागू गर्न को लागी हो।
म मेरी आमालाई उनको नागरिकताको बाटोमा मद्दत गर्न सकेजति गर्न चाहन्छु - जसरी उनले मेरी बहिनीहरू र मलाई सहयोग गर्न यति धेरै गरिन।
मेरो लागि, अध्यागमन भनेको अवसरको अर्थ हो। यो अस्तित्व को अर्थ हो। यसको मतलब हिंसा हटाउनु र घर भाँचिएको चोटबाट चोट पुर्याउनु हो, नयाँ याद र प्रभाव बनाउनको लागि जुन तपाईंले अब आफ्नै फोन गर्नुहुन्छ। अमेरिकाको जीवनले मलाई धेरै अवसरहरू दिएको छ तर यो संघर्षको आफ्नो निष्पक्ष हिस्साको साथ आएको छ।
मेरो बहिनीहरू र आमाको साथ एउटा साँघुरो स्टुडियो अपार्टमेन्टमा बस्नको मेरो शुरुको सम्झनाबाट, years बर्ष छायाँमा लुकिरहेको कारण हाम्रो नागरिकताको लागि मेरो अन्तिम साक्षात्कारमा हिंड्ने हाम्रो undocumented स्थितिको कारण। मैले मनाउने सबैको अनुहारमा म खुशी छु, र मुस्कुराउँछु।
यो उत्सव मेरो लागि मात्र होईन। यो उत्सव प्रत्येकको लागि हो कि जसले संघर्ष गर्यो र हरेक रोडब्लॉक, प्रत्येक थप्पड, प्रत्येक नाम उनिहरु लाई मार्यो, शान्ति खोज्नको लागि आफ्नो यात्रामा, र आफ्नो परिवारको लागि उत्तम जीवनको लागि लडे। यी विजय र संघर्षले मलाई मेरी आमा, मेरी दिदीबहिनीहरूको नजिक ल्याएको छ र संयुक्त राज्यको नागरिकको रूपमा मेरो लागि अझ राम्रो जीवन पाउनको लागि। अब जब मैले अन्तिम चरण लिन्छु, म लामो, चट्टान मार्ग, मैले मेरो वार्षिकोत्सव मनाउने कागज र मेरो आउँदै गरेको नागरिकता प्रतिबिम्बित गर्दछु।
यदि तपाईं कसैलाई चिन्नुहुन्छ जो नागरिकताका लागि Lending Circles प्रयोग गर्न सक्दछ, कृपया तिनीहरूलाई आज साइन अप गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् LenderCircles.org.